03/01/2021 - 04/01/2021 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ကို အပြီးသတ် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခြင်း။
ကြေညာချက် အမှတ် ( ၂၀/၂၀၂၁ )
၁။ ပြည်ထောင်စုအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူများ၏ ခိုင်မာသော လိုလားတောင့်တချက်မှာ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်မှု တည်းဟူသော လောကပါလတရားတို့ကို အခြေခံသည့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝအာမခံချက် ပေးနိုင်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ပေါက်လာရေး ဖြစ်သည်။
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) သည် စစ်အာဏာရှင်ဝါဒ သက်ဇိုးရှည်စေရန် ရည်ရွယ်ရေးသား ထားရုံမျှမက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အဟန့်အတားပြုလျက်ရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၃။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်လျက် နိုင်ငံတော်အာဏာကို အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့် ဤ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
၄။ အာဏာရှင်စနစ် ပပျောက်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) အပြီးသတ် ဖျက်သိမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်သူ့အစိုးရ ပေါ်ထွန်းရေး ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမို ကရေစီအင်အားစုများ စုပေါင်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်လျက် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
၅။ သို့ပါ၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အား ယနေ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် အပြီးသတ် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။
မြန်မာစစ်တပ် အကြီးအကျယ် ထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်ခြေ KNU သတိပေး
Karen National Union (KNU) တပ်သားများ
ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ မြန်မာစစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ အကြီးအကျယ် ထိုးစစ်ဆင်လာမယ့် အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးက အင်္ဂါနေ့မှာ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် နိုင်ငံတဝှမ်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကို မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံး နှိမ်နှင်းနေသလို တဖက်မှာလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကြား တိုက်ပွဲတွေလည်း ပေါ်ပေါက်နေတာပါ။ မြန်မာစစ်တပ်က လေကြောင်းကနေပါ ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်ထဲက ပြည်သူထောင်နဲ့ချီ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။
KNU တပ်ဖွဲ့ကလည်း မြန်မာစစ်တပ်က ဘက်ပေါင်းစုံကနေ အကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်လာရင် ရင်ဆိုင်တိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာပဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေနဲ့ ကရင်လူထုရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မြန်မာစစ်တပ်ကို ရင်ဆိုင်ရုံကလွဲပြီး ရွေးချယ်စရာ မရှိဘူးလို့လည်း KNU ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အရပ်သားအစိုးရဆီက တရားမဝင် အာဏာရယူထားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို အသိအမှတ်မပြုဖို့၊ စစ်ရေးနဲ့ စီးပွားရေးအားလုံးကို ဖြတ်တောက်ဖို့လည်း KNU က နိုင်ငံတကာကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်း ကချင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ KIA နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကြား တိုက်ပွဲတွေလည်း ပေါ်ပေါက်နေတာပါ။ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေအပေါ် စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးနှိမ်နှင်းနေတာကြောင့် ကလေးငယ်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင် ရာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေ သေဆုံးနေရတာကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချကြောင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၃ ဖွဲ့က လတ်တလော ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ညီနောင်မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA ၊ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင် MNDAA နဲ့ တအာင်းလက်နက်ကိုင် TNLA တို့က မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကို မရပ်ရင် နွေဦးတော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတွေဘက်က မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ရေး အတွက် ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အဆိုအရ ၂လအတွင်း အရပ်သားပြည်သူ ၅၁၂ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှု နောက်ဆက်တွဲ ဘဏ်နဲ့ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ရပ်ဆိုင်းမယ့်အခြေအနေ ဦးတည်နေ
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ- ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့က ATM စက်မှ ငွေထုတ်ဖို့ စောင့်နေသူများ
ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကနေ ပိုက်ဆံ ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏ အကန့်သတ် ဖြစ်လာတာကြောင့် ငွေလုံးငွေရင်းသုံးစွဲရတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါက ဘဏ်အကျပ်အတည်းနဲ့ ငွေကြေးလည်ပတ် စီးဆင်းမှု လုံးဝရပ်တန့်တော့မယ့် အခြေအနေဆီ တဖြည်းဖြည်း ဦးတည်နေတယ်လို့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့ သတင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် နန်လဖိုင်က ပြောပြပေးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတယောက်အနေနဲ့ ဘဏ်မှာ ငွေထုတ်မယ်ဆိုရင် တပတ်ကို ကျပ် သိန်း ၂၀၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုရင် သိန်း ၂၀၀ ထုတ်နိုင်တယ်လို့ ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ATM ငွေထုတ်စက်တွေကနေ ထုတ်မယ်ဆိုရင် အရင် ကျပ် ၅ သိန်းခွင့်ပြုထားတာကနေ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ကစပြီး တရက်ကို ကျပ်ငွေ ၂ သိန်းပဲ ထုတ်ယူခွင့်ပြုမယ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုလို မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်အသင်းက ညွှန်ကြားလိုက်ပြီး ပြည်တွင်း ဘဏ်ကြီးတခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ်ကတော့ အဲဒီအတိုင်း စတင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေရဲ့ ငွေထုတ်၊ ငွေလွှဲအပါအဝင် စည်းကမ်းချက်တွေကို ဗဟိုဘဏ်က အခါအားလျှော်စွာထုတ်ပြန်ပေးနေပြီး၊ ဘဏ်တွေ ပြိုလဲသွားမှာမျိုး စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူးလို့ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ လက်ရှိ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသော်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တခုလုပ်ရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ impact ကိုလည်း တွက်ချက်ပြီးမှ လိုအပ်တဲ့ဟာကို ကာလတခု အတိုင်းအတာ တခုကို ဒါ စည်းကမ်းတခု၊ စနစ်တခု သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ သတ်မှတ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တခုသည် serious ဖြစ်စရာ အကြောင်းပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ကိစ္စရပ် မရှိပါဘူး။ ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဘဏ်တွေ လည်ပတ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ စစ်ကောင်စီက ပြောပေမဲ့ လက်တတွေ့မှာ အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမင်းခင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“ တဖက်ကတော့ ဘဏ်တွေမှာ ငွေတွေစုပြုံထုတ်ကြလို့ ဘဏ်တွေ ယိမ်းယိုင်သွားမှာကို စိုးရိမ်တာမျိုးလည်း ရှိကောင်းရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖွင့်သလောက် ဖွင့်နေတဲ့ဘဏ်တွေ လုပ်နေတဲ့ အပိုင်းလေးတွေက စီးပွားရေးအတွက် ငွေရေးကြေးရေးလည်ပတ်အောင် ဘာကြောင့် ငွေသားကို ထုတ်ပေးတာမျိုး၊ လွှဲပြောင်းပေးတာမျိုး မလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကတော့ အတော်စဉ်းစားရခက်တယ်။ ဒီမှာ ခက်တာက ဗဟိုဘဏ်ကိုယ်တိုင်က အကန့်အသတ်တွေ အများကြီး လုပ်နေတော့ ဘဏ်တွေအပေါ်မှာ လူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ထိခိုက်သွားမှာ စိုးရိမ်တယ်။ တဖက်ကလည်း စီးပွားရေး လည်ပတ်မယ့် အလားအလာ မမြင်ရသေးဘူးဆိုတော့ ထိပ်ဆုံးက နိုင်ငံရေးပြဿနာက တိုင်းပြည်ကို အများကြီး ဒုက္ခပေးနေပြီ။ အဆိုးသံသရာ လည်နေပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ ပြိုလဲတာမျိုးအထိ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်မျိုးအထိ ရှိတယ်။”
ခုလိုအခြေနေမှာပဲ အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်နေသူတွေက လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကနေ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးကို ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက် လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပေါ်ကနေ ငွေအလွှဲအပြောင်းလုပ် ငွေပေးခြေနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရပ်တံ့နေပါတယ်။ စီးပွားရေးလည်ပါတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေ ဖြတ်တောက်ထားတာ၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာတွေက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ မလွယ်နိုင်လောက်တဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေမျိုးအထိ အနှေးနဲ့အမြန် ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင်တွေက သတိပေးထားပါတယ်။
ချေးငွေထုတ်ပေးထားပြီး ငွေကြေးလည်ပတ်မှု မရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေက အတိုးနှုန်းလျှော့ချပေးဖို့ ဗဟိုဘဏ်ကို ဒီရက်ပိုင်း တိုက်တွန်းလာပါတယ်။
ဘဏ်တိုးနှုန်းကို လျှော့သည်ဖြစ်စေ၊ မလျှော့သည်ဖြစ်စေ ဘဏ်တွေဟာ အခြေအနေတခုကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဘဏ်ခွဲများတဲ့ ဘဏ်တွေ တွက်ခြေမကိုက်တော့သလို ဘဏ်သေးတွေလည်း အကျပ်အတည်းကြုံလာနိုင်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုမြင့်မားလာနိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမိမိချိုက ဗွီအိုအေကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
“Commodity flow ( ကုန်စည်စီးဆင်းမှု) က ပုံမှန်အခြေအနေ မဟုတ်တော့ဘူး၊ financial flow ကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး တွေ့နေရပြီ၊ နောက် သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှုက ပုံမှန်အခြေအနေ မဟုတ်တော့တာ တွေ့တဲ့အခါမှာ လူတွေက တဖြည်းဖြည်း panic ( ထိတ်လန့်မှု) ဝင်လာနိုင်တယ်။ ဒီ panic ဆိုသည်မှာ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ စီးပွားရေးတခုလုံးကို ယိုင်လဲသွားတယ်၊ ယိုင်တာကို ပိုယိုင်သွားစေတယ်။ အခြေအနေက ပိုဆိုးစေနိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် စောစောကပြောတဲ့ ဒီသုံးခုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်ပြီး ထိန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါက ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာက နိုင်ငံရေးအပေါ်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းလို့ ပြောလို့ရတယ်၊ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ပြောချင်တယ်။”
အာဏာသိမ်းတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အစောပိုင်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းက ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ပြတ်တောက်လို့ ဘဏ်တွေအားလုံး ယာယီပိတ်ထားပေးဖို့ ညွှန်ကြားလာတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းဘဏ်တွေ တပြိုင်နက်တည်း ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်းကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် စီးပွားရေးလာလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေထဲက ကိုရီးယားဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၁၁ ခုက ငွေထုတ်၊ ငွေသွင်းနဲ့ ငွေလွှဲပြောင်းတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို မတ်လထဲမှာ ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဝင်ငွေလည်ပတ်မှုက ရပ်သွားတာကြောင့် ဘဏ်စုဆောင်းငွေတွေကိုပဲ ထုတ်သုံးနေရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်တွေမှာ ဒီငွေပမာဏ လျော့ကျသွားနိုင်ပြီး ဘဏ်အခက်အခဲတွေ ရှိလာနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာမိမိချိုက ပြောပါတယ်။
“ ဆိုတော့ ဘဏ်က ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ များလာပြီ များလာတော့ ဘဏ်တိုးနှုန်းတွေ လျှော့ချခိုင်းမယ်၊ ဘဏ်တိုးနှုန်း လျှော့ချခိုင်းတော့ ဒီလူတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ဘယ်လုပ်မလဲ ဒီအချိန်မှာ၊ ဒေါ်လာဝယ်မှာပေါ့။ သူများနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာပေါ့ ပိုက်ဆံ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက။ ဥပမာ စင်္ကာပူတို့ ဘာတို့မှာ အိမ်တွေဝယ်တာတို့ မြေတွေဝယ်တာတို့ သွားလုပ်ကြတော့မှာပေါ့။ ဘဏ်ထဲမှာ စောစောကပြောတဲ့ ၄၅ ထရစ်လီယံလောက်ရှိတဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ ပမာဏ လျော့သွားမှာပေါ့။ လျော့တာ မလျော့တာ နောက်လာမယ့် ၆လလောက်နေရင် အဲဒီဘဏ်တွေရဲ့ ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက် သိလိမ့်မယ်။”
အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်တဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေ တော်တော်များများ ပါဝင်ကြတဲ့အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကို ရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။ အခုထိလည်း ဝန်ထမ်းတွေ ရုံးတက်ဖို့ သွားရေးလာရေး အခက်အခဲ၊ လုံခြုံရေး အခြေအနေတွေကြောင့် ဘဏ်တွေ ပုံမှန်လို ပြန် မလည်ပါတ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်နေချိန်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက် ခုလို ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ၊ ငွေကြေး လည်ပါတ် စီးဆင်းမှုတွေ ထိခိုက်ပြီး စီးပွားရေး ကျဆင်းတဲ့ဖက် ဦးတည်သွားနေတဲ့အပေါ် စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
နန် လဖိုင်/ VOA Burmese
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်မှု CNN သတင်းထောက်သိအောင် ပြည်သူတွေ နည်းမျိုးစုံပြသ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် ၂၄ နာရီအတွင်း သေဆုံးသူ သုံးဦးထက် မနည်း ရှိနေပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ နေရာအနှံ့မှာ ဆက်ရှိနေပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်ချုပ် Clarissa Ward ဟာ မြန်မာပြည်ကို ဒီနေ့ရောက်ရှိပြီး စစ်ကောင်စီ အစီအစဉ်နဲ့ သတင်းယူနေချိန်မှာ ပြည်သူတွေကလည်း စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်း ကမ္ဘာက သိအောင် ထုတ်ဖော်ပြသနေကြပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ သတင်းဌာန ငါးခုကိုပိတ်ပင်ပြီး၊ သတင်းထောက် ၅၅ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သလို၊ ၁၀ ယောက်ကျော်ကို တရားစွဲထားပေမယ့်၊ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုက ကမ္ဘာကျော် CNN သတင်းဌာနက သတင်းထောက်ချုပ် Ms. Clarissa Ward ကိုပြည်ဝင်ခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Ms. Clarissa Ward ကို စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ စစ်ကားတွေ ခြံရံလို့ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ သတင်းယူခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် CNN သတင်းထောက် သတင်းယူတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ၊ ပြည်သူတွေကလည်း သံပုံးတီးတာ၊ ကာဟွန်းတီးတာ၊ လက်သုံးချောင်းထောင်ပြတာမျိုးတွေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်နေတာကို ကမ္ဘာက သိအောင် ထုတ်ဖော်ပြသတာတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေပစ်ခတ်လို့ ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ချီ သေဆုံးနေရပေမယ့်၊ မတ်လ ၃၀ ရက် မနေ့ညနေကနေ၊ ဒီနေ့ညနေထိ ၂၄ နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး သုံးယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ RFA က စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။
တစ်ပြည်လုံးအနေနဲ့ အကြမ်းဆုံးပစ်ခတ်ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့နေရာဟာ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံ မြို့နယ် ဖြစ်နေပြီး အဲဒီမှာ မနေ့ညက သေဆုံးတဲ့သူ နှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်က တောင်ဒဂုံ ၁၀၇ ရပ်ကွက်မှာ ပစ်သတ်ခံရရတာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ရဲ့ အလောင်းပဲ ရလိုက်တယ်၊ နောက်တစ်ယောက် အလောင်းကိုတော့ စစ်တပ်ကယူသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တပ်နဲ့ရဲတွေက အိမ်တွေထဲထိ ဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီး ပစ်ခတ်တာလို့ တောင်ဒဂုံ ဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
“မနေ့က ၁၀၇ ၊ ၁၀၄ ရပ်ကွက်ဘက်မှာ တစ်ယောက်ဆုံးတယ်။ နောက်သူတို့အိမ်တွေထဲလည်း ရှာတယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက်ပစ္စည်းတွေ ရိုက်ခွဲတာတွေတော့ ရှိတယ်။ ညဘက်ထိတော့ မပစ်ဘူး။ နေ့ခင်းပိုင်း လောက်ထိ ပစ်တယ်။ ညနေစောင်း ၆ နာရီလောက်ကျတော့ အဲဒီရပ်ကွက်တွေထဲကို ဝင်ပြီးတော့ မွှေတယ်။ လောလောဆယ် ၇၀၊ ၇၁ ရပ်ကွက်တွေဘက်မှာတော့ နည်းနည်းငြိမ်နေတယ်။ ခံတပ်တွေလည်း မရှိတော့ဘူး။”
တောင်ဒဂုံမှာ အင်တာနက် ဖိုက်ဘာကြိုးတွေနဲ့ ဝိုင်ဖိုင်ပုံးတွေကို စစ်တပ်က ဖျက်ဆီးထားပြီး ရပ်ကွက် တချို့မှာ အင်တာနက် ပြတ်တောက်နေပါတယ်။
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်း အခုသတင်းကိုရေးနေတဲ့အချိန်ထိ တောင်ဒဂုံ ၁၀၇၊ ၅၄၊ ၅၆၊ ၇၀၊ ၇၁ ရပ်ကွက်တွေမှာ ပစ်ခတ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီတောင်ဒဂုံမှာ စစ်တပ်နဲ့ ရဲက သေနတ်အပြင် လက်နက်ကြီးတွေပါ အသုံးပြုနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောနေကြပြီး မတ် ၂၆ ရက်နေ့ထဲက အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေတာ မတ် ၃၀ ရက်နေ့ အထိ သေဆုံးသူဟာ ၆၀ ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပြောနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် မြို့နယ်ထဲမှာကို သွားရေးလာရေး ခက်ခဲနေတဲ့အတွက် သေဆုံးသူတွေနဲ့ ဒဏ်ရာရသူတွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို သတင်းစုဆောင်း အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စာရင်းအရ မနေ့က တစ်ရက်တည်းမှာတင် သေဆုံးသူ ရှစ်ဦးထက်မနည်း ရှိနေတယ်လို့သိရပြီး၊ RFA က စုံစမ်း သိရှိရတဲ့စာရင်းနဲ့ပေါင်းရင် ၂၉ ရက်နေ့ ညကနေ ဒီနေ့ညနေထိ ၂၈ နာရီအတွင်း သေဆုံးရသူ အနည်းဆုံး ၁၆ ယောက်ရှိနေပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း သံလျင်မြို့မှာလည်း မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ထဲက စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေက အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နေတာ ဒီနေ့အထိပဲလို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဒေသခံတယောက်က ပြောပါတယ်။
“မနက်ပိုင်းသူတို့ဝင်ပစ်တော့ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ သေတယ်လို့တော့ မကြားဘူး။ ဒါပေမဲ့ ညနေပိုင်း ၂ နာရီလောက်က စပြီးတော့ မိသားစုတော်တော်များများက အိမ်တွေကို ထားပြီး ထွက်ပြေး သွားတာရှိတယ်။ လမ်းထဲတွေထိ ဝင်ပစ်တာတော့ ကြားတယ်။ လိုင်းတွေ မသုံးရဘူး။ ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့ သုံးယောက် လေးယောက်လောက် ဒဏ်ရာရတယ်ပြောတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရွာတစ်ခုတည်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ မြို့ဟောင်း အရှေ့ဘက်တွေမှာလည်း ပစ်တယ်။ ဘုရားကုန်းဘက်လည်း ပစ်တယ်ကြားတယ်။ ညဘက်လည်း အောင်ချမ်းသာဘက်ကို ဝင်ပစ်သွားတယ်။ ၁၀ နာရီ ၁၁ နာရီလောက် ဝင်ပစ်ပြီးတော့ လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရင် တွေ့တဲ့သူကို ဖမ်းသွားတာရှိတယ်။”
ရန်ကုန်မြို့မှာ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာများလွန်းတဲ့အတွက် လူငယ်တွေက စစ်တပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ အောင် ဆန္ဒပြပွဲတွေကို မြို့နယ်တွေအလိုက် ရပ်ကွက်တွေလမ်းတွေမှာ အစုအဖွဲ့ငယ်တွေနဲ့ ပြောက်ကျားပုံစံ လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
တာမွေမြို့နယ်နဲ့ သာကေတမြို့နယ်တွေမှာ စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေက အရပ်ဘက်အိမ်စီးကားတွေပေါ်ကနေ ရပ်ကွက်ထဲက လမ်းသွယ်တွေထဲအထိ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာ၊ လူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေပါ တယ်။
ပဲခူးမြို့မှာလည်း မတ် ၃၀ ရက် မနေ့က ဟေမာန်ချေးငွေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ အကြွေး ကောက်ဖို့ သွားရင်းလမ်းမှာ စစ်တပ်နဲ့ ရဲက ပစ်လို့ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကိုဇေယျာမျိုးနိုင်ဖြစ်ပြီး၊ ပဲခူးမြို့ စိန်သာလျောင်းဘုရား မုဒ်ဝမှာ ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကတော့ ဖမ်းဆီးခံ လိုက်ရပါတယ်။
ကိုဇေယျာမျိုးနိုင်ရဲ့အလောင်းကို မိသားစုက ရင်ခွဲရုံမှာ သွားရောက်ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာတော့ ရင်ဘတ် တစ်ခုလုံး ခွဲထားပြီး၊ အဝတ်မပါဘဲ ဝတ်လစ္စလစ်နဲ့ ရုပ်အလောင်းပဲ ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ သူ့သူငယ်ချင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း ညောင်ဦးမြို့ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာလည်း မနေ့ည ၁၀ နာရီလောက်က စစ်ကောင်စီရဲ့ တပ်တွေပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူ နှစ်ဦး ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ညောင်ဦး ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“မနေ့ညက စစ်အာဏာရှင်ကနေပြီး ညောင်ဦးမြို့ အသက် ၆၀ ကျော်တွေကို ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့အတွက် လိုက်စစ်ချိန်မှာ ရပ်ကွက်က ခဲနဲ့ထုလို့ဆိုပြီး ညက ဝင်ပစ်တယ်လို့ ကြားတယ်။ ညက နှစ်ယောက်မှန်တယ်။ တစ်ယောက်က ရင်ဘတ်ကို မှန်တယ်။ တစ်ယောက်က လက်မောင်းကို မှန်တယ်။ သီရိမင်္ဂလာ ရပ်ကွက်ထဲကို ည ၁၀ နာရီလောက်ကို ဝင်ပစ်တယ်လို့ကြားပါတယ်။ ရင်ဘတ်ကို မှန်သွားတဲ့ သူကို မှန်မှန်ချင်းကို စစ်တပ်က ကားနဲ့ခေါ်သွားပြီး ရွှေစည်းခုံဘုရားအရှေ့ဘက်က ပန်းခြံ နားရောက်တော့ ကားပေါ်က ချခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ မျက်မြင်တွေ့တဲ့သူက သိမ်းပြီးတော့ ဆေးကုသနေတယ်လို့ ကြားတယ်။"
အဲဒီ ပုဂံ၊ ညောင်ဦးမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီး ပုဂံက နာမည်ကြီးဘုရားတွေမှာ ဒေသခံတွေက စစ်ကောင်စီဝင်တွေကို ကျိန်စာတိုက် ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ကြပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းမှာတော့ စက်မှုဇုန်စုပေါင်းသပိတ်၊ ဆိုင်ကယ်သပိတ်တွေနဲ့ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ မုံရွာ၊ ကန့်ဘလူ၊ ကလေး မြို့နယ်တွေမှာလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်ရှိနေပြီး မုံရွာမြို့ပေါ်က ကောင်းကင်မှာ စစ်သုံးရဟတ်ယာဉ် သုံးစင်း ပျံဝဲနေတာ နေ့ခင်း ၁ နာရီအချိန်ထိ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ ဖားကန့်၊ ကောလင်း၊ နတ်မောက်၊ ခင်ဦး စတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်ရှိနေပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ကစလို့ ဒီနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက်ထိ နှစ်လ အတွင်း စစ်တပ်နဲ့ရဲက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တာ၊ ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်တာ၊ မီးရှို့ သတ်ဖြတ်တာတွေ ကြောင့် သေဆုံးရတဲ့ပြည်သူ အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကလေး ၃၈ ယောက် ပါဝင်ပါတယ်။
အဖမ်းခံရတဲ့သူဦးရေကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ ကောက်ယူထားတဲ့ အချက်လက်တွေအရ စုစုပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၃၇ ယောက်က ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခံထားရတယ်လို့ AAPP က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့နေနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ခွင့်ရ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမှုလိုက် ရှေ့နေ အဖွဲ့ထဲက လူငယ်ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အွန်လိုင်းဗီဒီယိုစနစ်နဲ့ ဒီနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီလောက်က ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ အမှုလိုက်ရှေ့နေ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဒီလိုတွေ့ဆုံချိန်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ဆုံခွင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ရဲ အစောင့်အကြပ် တွေ ရှိနေတာကြောင့် အမှုကိစ္စကလွဲပြီး ဘာမှဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အမှုလိုက်ရှေ့နေ ခြောက်ယောက်လုံးနဲ့ လူချင်းတွေ့ခွင့်ပေးဖို့ အနားမှာရှိတဲ့ ရဲတွေကို ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်း သိရကြောင်း ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျှက်ရှိတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဒေါ်မင်းမင်းစိုးရဲ့ ပြောပြချက်ကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရန်ကုန်မှာ နောက်ထပ်အမှုတစ်ခု တိုးဖွင့်ထားတယ်လို့ သိထားပေမယ့် ရှေ့နေအဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့ ဦးခင်မောင်ဇော်ကပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လိုင်စင်မဲ့ walkie-talkie လမ်းလျှောက်စကားပြောစက် လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကန့်သတ်စည်းကမ်းတွေ ဖောက်ဖျက်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုနဲ့ အများပြည်သူ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ကြံရွယ်မှုစတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ အမှုလေးမှုထက်မနည်း စစ်ကောင်စီက စွဲချက်တင်ထား ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုလိုက်ဖို့အတွက် ရှေ့နေ ခုနစ်ဦး ပါဝါတင်နိုင်ဖို့ လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ထဲက အငယ်တန်းရှေ့နေ နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးယုယချစ်နဲ့ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးတို့ နှစ်ယောက် ရှေ့နေ နှစ်ဦးကိုပဲ လတ်တလော မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပါဝါတင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားသေးတယ်လို့ အမှုလိုက်ရှေ့နေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဇော်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုံးချိန်းမတိုင်ခင် ရှေ့နေနဲ့တွေ့
ပုဒ်မ (၅)ခုနဲ့ တရားစွဲဆို ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက်မှာ သူ့အတွက် အမှုလိုက်ဖို့ ရှေ့နေပါဝါ တင်ထားသူတွေနဲ့ ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်စ်ကတဆင့် တွေ့ဆုံ စကားပြောခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတွေကို အမှုပါဝါ တင်ထားတဲ့ကိစ္စပြောဖို့ ခေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးခန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အွန်လိုင်းကတဆင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် ကြာ စကားပြောခွင့် ရခဲ့တာလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ပုံ တွေ့ရပြီး ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ဟာ အစိုးရသစ် တက်ရမယ့်အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
တခါ အမေရိကန် အခြေစိုက် CNN ရုပ်သံသတင်းထောက်တစ်ဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှှိနေပါတယ်။ သူဟာ စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးချိန်းရက်မတိုင်မီ တရက်စောပြီး ရုတ်တရက် သူ့ရဲ့ရှေ့နေတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာငွေစက္ကူထုတ်ဖို့ ကုန်ကြမ်း တင်သွင်းမှု ဂျာမနီကုမ္ပဏီ ဆိုင်းငံ့လိုက်
မြန်မာငွေစက္ကူကျပ် ထုတ်ဖို့ ကုန်ကြမ်းတွေကို Giesecke+Devrient ကုမ္ပဏီဆီက မှာယူ တင်သွင်းခဲ့
ဂျာမနီနိုင်ငံ Giesecke+Devrient ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံသုံး ငွေစက္ကူတွေ ပုံနှိပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းမှုအားလုံးကို ချက်ချင်း ဆိုင်းငံ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ဒီကနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Giesecke+Devrient ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို အထူးစိုးရိမ် ဝမ်းနည်းစိတ်နဲ့ စောင့်ကြည့် လေ့လာနေခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအကြား အကြမ်းဖက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ Giesecke+Devrient ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးနဲ့ရော၊ ဂျာမနီအစိုးရ၊ သံတမန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါ ဆက်သွယ် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Giesecke+Devrient ကုမ္ပဏီဟာ ဗဟိုဘဏ်နဲ့ မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားတွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသုံး ငွေစက္ကူတွေ ပုံနှိပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းဖို့နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စာချုပ်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းမှု မဆိုင်းငံ့ခင် ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေအတွင်းကတည်းက Giesecke+Devrient ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စီးပွာရေး အဆက်အသွယ်တွေ ကန့်သတ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
CRPH အတွက် လက်ခံနေတဲ့ ရန်ပုံငွေ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နှောင့်ယှက်ခံရ
CRPH အတွက် ရန်ပုံငွေ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
CRPH အတွက် ထည့်ဝင်နေတဲ့ ရန်ပုံငွေ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နှောင့်ယှက် ခံရတဲ့ အတွက် အလှူငွေ လက်ခံမှုတွေကို ခဏရပ်နားထားပေမယ့် မကြာခင်အတွင်း ပြန်ပြီး ဖွင့်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း CRPH နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကိုယ်စားလှယ် ဦးထင်လင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH အတွက် GoFundMe ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကတဆင့် ကမ္ဘာတလွှားက အလှူငွေတွေ ထည့်ဝင်နေရာမှာ တနင်္လာနေ့က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ သန်းကျော်ထိ လက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။
ရန်ပုံငွေ နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ CRPH နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကိုယ်စားလှယ် ဦးထင်လင်းအောင်ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့ ဒီ CRPH အတွက်ကို သူတို့ ရန်ပုံငွေတွေ လှူဒါန်းနေကြတဲ့အခါမှာ အခု GoFundMe ကနေတဆင့်ပေါ့နော် CRPH ကို လှူဒါန်းတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း CRPH ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ အခု လှူဒါန်းနေတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေရဲ့ အခြေအနေက ဘယ်လို ရှိပါသလဲ။
ဦးထင်လင်းအောင်။ ။ တကယ်တော့ အဲဒါလေးနည်းနည်း ကျနော်ရှင်းပြချင်တယ်ခင်ဗျ GoFundMe နဲ့ လှူဒန်းတာက CRPH ကို လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာထက်ကို ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ စစ်ဘေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ ရှင်းရှင်းပြောရင် အခုဟာက စစ်ဘေးလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့အတွက်ကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ကနေပြီးတော့ တာဝန်ယူပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ် ဒီအလှူငွေ ကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကို ကျနော်တို့ CRPH က ပြည်သူတွေကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျနော်တို့ ဖော်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ တခုခု အနှောင့်အယှက်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ကျနော်တို့ အခက်အခဲလေးတွေ ကြုံနေရတာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အဲဒီအတွက်ကြောင့် လက်ရှိအနေအထားမှာ အလှူခံနေတဲ့ Website ကို ခဏရပ်ထားပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ အဲဒါဆိုရင် ပြည်သူတွေ ဘက်ကနေပြီးတော့ လှူဒါန်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့လောက် ပြန်ပြီးတော့ လှူဒါန်းလို့ ရမလဲ။
ဦးထင်လင်းအောင်။ ။ အဲဒါအတွက်ကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ကနေပြီးတော့ ဖြေရှင်းချက် ပြန်လည်တင်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီတင်ပြချက်ကို သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ အဆင်ပြေပြီဆိုရင် ပြန်ပြီးတော့ ဖွင့်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရပ်အတိအကျတော့ ပြောလို့မရသေးဘူး ။ များသောအားဖြင့် ၁ ရက် ၂ ရက်အတွင်းမှာ သူတို့ ဖြေရှင်းချက်ကို ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် ဒါက ပြန်ပြီးတော့ ဖွင့်ပေးလို့ ရပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ တဖက်မှာတော့ ဒီလှူဒါန်းငွေ ပမာဏနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခု ဦးထင်လင်းအောင်တို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုး ရှိပါသလားရှင့်။
ဦးထင်လင်းအောင်။ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒါကတော့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ စေတနာအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ သူ့ amount ဘယ်လောက်ပဲ ရောက်ရောက် ကျနော်တို့ကတော့ ဒါကို ဘယ်လောက်ရရမယ် ၊ ဘယ်လောက် ရောက်ရမယ် ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အခုဆိုရင်ပဲ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ စေတနာကြောင့် ဒီငွေ ပမာဏက ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် သန်းနဲ့ ချီပြီးတော့ တက်လာတာ ကျနော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ချက် သီးသန့်အနေနဲ့ မရှိပါဘူး။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ စောစောက ဦးထင်လင်းအောင်လည်း ရှင်းပြသွားပါတယ် အခုလှူဒါန်းတဲ့ငွေတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးသဖြင့် စစ်ဘေးဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကြောင့် အခက်အခဲ ကြုံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းမယ်ပေါ့နော်။ CDM မှာပါတဲ့သူတွေကိုလည်း လှူဒန်းမယ့်အထဲမှာ ပါတဲ့အခါကျတော့ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေဆီကို ဒီရန်ပုံငွေတွေ ရောက်ဖို့ အဲဒါမျိုးကျတော့ CRPH က ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သလဲရှင့်။
ဦးထင်လင်းအောင်။ ။ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ ။ အခုအချိန်မှာတော့ ဘဏ်တွေကလည်း ပိတ်ထားတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အဲဒီငွေတွေရဲ့ စီးဆင်းမှုတွေကို စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ အတင်းကို ပိတ်ဆို့မှုတွေ တင်းကျပ်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တော်တော်လေး အခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါက လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ လူထုဆီကို ဒီအလှူခံထားတဲ့ ငွေတွေကို ရောက်အောင်ပို့ဖို့အတွက်ကို လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စမှာ ဒါလူထုကို ပိုပြီးတော့ ဒုက္ခရောက်အောင် သူတို့ဘက်က လုပ်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ မြင်တယ်ခင်ဗျ။ အခက်အခဲတွေက တော်တော်ကို ကျနော်တို့အတွက် ဖြစ်နေပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ အခုရလာတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားထဲက ဘယ်လို ဆောင်ရွက်သွားမလဲရှင့်။
ဦးထင်လင်းအောင်။ ။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့လည်း နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှာရှိပါတယ်။ ဒါ ကျနော့်အနေနဲ့ သီးသန့်ကြီး ထုတ်ဖော်ပြောနေလို့ မရပါဘူး။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ အလှူခံတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ ဒါကို အဆင်ပြေသွားအောင် လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ လှူဒါန်းတဲ့သူတွေဘက်ကရော ဒီအပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုပေါ့နော် ၊ အဲဒါက ဘယ်လောက်အထိ ယုံကြည် စိတ်ချရမလဲရှင့်။
ဦးထင်လင်းအောင်။ ။ လှူဒါန်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ယုံကြည် စိတ်ချလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းဆိုတာကလည်း သမာသမတ်ကျကျနဲ့ ဟိုတုန်းကတည်းက နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မြင်မြင်သာသာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကလည်း သူတို့ကို ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိပါတယ်။ CRPH က ယုံကြည်တဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုကလည်း ယုံကြည်မယ်ဆိုတာ ဒါ ရှင်းရှင်းပဲ ကျနော်တို့က ယုံကြည်ပြီးသားဆိုတော့ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဒီအပေါ်မှာ သံသယရှိမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ လုံးဝ မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ကာလတိုအတောအတွင်းလေးမှာ ငွေတွေ ဒီလောက် ခဏလေးနဲ့ ပမဏတွေ အများကြီး ဖြစ်လာတာပါ။
မအင်ကြင်းနိုင် ။ ။ တဖက်မှာ စစ်ကောင်စီက တော်တော်လေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အင်အားအရမ်းသုံးပြီးတော့ ဖိနှိပ်တဲ့အပေါ်မှာ ကျတော့ရော ပြည်သူတွေရော နောက်နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေ တိုင်းရင်းသားတွေကရော သူတို့က ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ဖယ်ဒရယ်တပ် ဒါမျိုးတွေ ဖွဲ့စည်းဖို့လည်း ရန်ပုံငွေတွေ အသုံးပြုဖို့ လိုလိုလားလားပေါ့ သူတို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာရော ဦးထင်လင်းအောင် ဘယ်လိုအမြင်ရှိပါသလဲ။
ဦးထင်လင်းအောင်။ ။ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ အများကြီး မပြောလိုပါဘူး။ ဖယ်ဒရယ်တပ်မတော်ဆိုတာကတော့ အစိုးရတရပ်ဖြစ်လာရင် တပ်မတော်ဆိုတာ လူထုကို အကာအကွယ်ပေးမယ့် တပ်မတော်ဆိုတာကတော့ ရှိလာမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဒါရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လူထုကို တကယ့်ကို အကာအကွယ်ပေးမယ့်ဖယ်ဒရယ်တပ်မတော်ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ ကျနော် ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး။
အင်ကြင်းနိုင်/ VOA Burmese
ဖာပွန်မြို့ထဲအနှံ့ မြန်မာစစ်တပ် ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်
စစ်ရှောင်ကရင် ဒုက္ခသည်များ (Photo by Handout / Free Burma Rangers / AFP)
ကရင်ပြည်နယ် ၊ ဖာပွန်မြို့ပေါ်မှာပဲ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က အိမ်တွေထဲကို လိုက်လံပစ်ခတ်တာ ၊ လူနေရပ်ကွက်တွေက တံတားတွေကိုဖျက်ဆီးတာ၊ မီးရှို့တာတွေ လုပ်နေတာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးနေရတဲ့ သတင်းကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မအေးအေးမာက ပြောပြပေးမှာပါ။
ကရင်ပြည်နယ် ၊ ဖာပွန်မှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KNU တပ်မဟာ(၅)တို့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ၂ရက်ဆက်တိုက် ဖာပွန်မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာကို မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က လေယာဉ်တွေနဲ့ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်မူတွေ လုပ်ခဲ့တာပါ။ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာတော့ ဖာပွန်မြို့ပေါ်ကလူနေရပ်ကွက်တွေထဲကို လိုက်လံပစ်ခတ်မူ လုပ်နေတာကြောင့် အိမ်ထဲတွေမှာတောင် မနေရဲတော့ပဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်း ဖာပွန်မြို့ခံတဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ဖာပွန်မှာ မနေ့ညကတည်းက သူတို့တွေ လိုက်ပစ်နေကြတယ်။ ပြည်သူလူထုရပ်ကွက်ထဲထိ လိုက်ပစ်နေတယ်။ ဒီနေ့ နေ့လည်လည်း တနေကုန်လိုက်ပစ်တယ်။ အခုချိန် ညဘက်ထိလည်း လိုက်ပစ်နေတယ်။ ခလရ ၁၉ နဲ့ နီးတဲ့ မက္ကာဟဲရပ်ကွက်ထဲမှာဆို အခု မီးတွေလောင်ကုန်လို့ အခုပြည်သူတွေ နေတဲ့နေရာတွေမှာ မီးတွေလောင်နေလို့ တောင်ကုန်းပေါ်တွေထိ လိုက်ပြေးနေရတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တွေ လိုက်မီးရှို့ ၊ တံတားတွေကို လိုက်ဖျက်ဆီးနေကြတယ်၊ ပြည်သူလူထုတွေ အိမ်ပစ် အိုးပစ်နဲ့ ပြေးတယ်ဆိုတာ တောင်စဉ်ရေမရ ဖြစ်သလို ပြေးနေရတယ်။ အဲဒီဘက်မှာက ပြေးဖို့ နေရာမရှိဘူး။ အရှေ့ဘက်မှာလည်း စစ်စခန်းတွေ ၊ အနောက်ဖက်ဆိုလည်း စစ်တပ်တွေ ရှိနေတာ ပြေးဖို့လမ်းပေါက်မရှိဘူး၊ အိမ်ထဲမှာ မနေရဲတော့ဘူး ။ ရပ်ကွက်(၁)ဆိုလည်း နီးစပ်ရာ လူတွေ စုပြီး ပုန်းနေရတယ် ။ အပင်အောက်တွေ၊ ချိုင့်တွေထဲမှာ လိုက်ပုန်းခိုနေရတယ်။”
လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့ ဖာပွန်ခရိုင်ထဲက ကျေးရွာသား ၁ သောင်းလောက်ကတော့ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ် တောထဲတောင်တွေထဲမှာ လိုက်လံပုန်းအောင်း နေရပါတယ်။
ဖာပွန်မြို့ပေါ်လူထုကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေက ဆန္ဒထုတ်ဖော်မူတွေလုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပြီး တချို့နေရာတွေမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တုန်းက KNU က လုံခြုံရေးယူပေးတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ အခုလက်ရှိမှာတော့ ဖာပွန်မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်တွေမှာ နေထိုင်နေတဲ့ လူထုတွေကိုလည်း မြန်မာစစ်တပ်က လိုက်လံ ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် အိမ်တွေမှာလည်း မအိပ်ရဲပဲ ပြေးစရာမြေမရှိ ဖြစ်နေရတယ်လို့ ဖာပွန်မြို့ခံတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
နေပြည်တော် NLD အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အမျိုးသားဒိမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ကျော် ခေါ် အဂ္ဂမိုးညို။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KUN တပ်မဟာ ၅ နဲ့ တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေထဲက ကျေးရွာတွေကို အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက တိုက်လေယာဉ်တွေသုံးပြီး ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် ကလေးငယ်တွေ အပါအဝင် ဒေသခံရွာသား ဆယ်ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး အများအပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရကြပါတယ်။
စစ်ဘေးကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးခိုလှုံတဲ့ သူတွေကိုလည်း ထိုင်းစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေက ပြန်နှင်ထုတ်တာတွေ ကြုံနေရပါတယ်။ အလားတူပဲ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့လည်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေကို မတ်လ ၃၀ ရက် မနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်က လေယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရပ်သား ၁၁ ယောက် သေဆုံးပြီး ငါးယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက RFAကို ပြောပါတယ်။
ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့နယ် မဒမချောင်းဖျားက ရွှေသတ္တု လုပ်ကွက်တစ်ခုပေါ် စစ်ကောင်စီတပ်တွေက လေယာဉ် နှစ်စင်းနဲ့ ဗုံးကြဲခဲ့တဲ့အတွက် ရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ၁၁ ယောက် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ရွှေကျင်မြို့ ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့က အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် စောအယ်စတားက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"မနေ့က ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ စစ်ကောင်စီအဖွဲ့က လေယာဉ်နဲ့ ကြဲချတဲ့အခါမှာ အဲမှာ ရွှေတူးဖော်တဲ့ ကိုမိုးအောင်ဦးစီးတဲ့ ရွှေကုမ္ပဏီက သူတို့အဖွဲ့ကို ၁၁ယောက် ထိပြီးတော့ သေဆုံးသွားတာပေါ့၊ ကျန်တာ ကတော့ ဒဏ်ရာက ငါးယောက်ရတယ်၊ အရင်က တစ်ခါမှ လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးတွေကြဲတာဘာညာ မရှိဘူးဗျ၊ ကေအမ်ယူ အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ လူမှုရေးအဖွဲ့ရော စုပေါင်းပြီးတော့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှ ဆေးထိုးပေးတာ၊ ကုသပေးတာတွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်"
စစ်ကောင်စီတပ်တွေ မနေ့က ဗုံးကြဲခဲ့တဲ့နေရာဟာ ကေအန်ယူနယ်မြေ ဆောထိ (ရွှေကျင်) မြို့နယ်၊ မဲ့ကဒိ အုပ်စုမှာ တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ကနေ ၂၉ ရက်နေ့အထိ လေယာဉ်ပျံသန်းတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
အလားတူ မနေ့ညနေပိုင်းကလည်း ကရင်ပြည်နယ်၊ မုတရော်ခရိုင်၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KUN တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေထဲက မဲပန်ဝနဲ့ မဲဝိုင်ရွာတွေကို လေယာဉ်တွေပေါ်က ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် ထိခိုက် သေဆုံးမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
မနေ့က လေယာဉ်နဲ့ လာပစ်ချိန်မှာ ပုန်းနေရတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ ရိက္ခာလမ်းကြောင်းကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ အချိန် ၂၄ နာရီပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် KNU က လက်မခံပဲ ငြင်းလိုက်တာကြောင့် ၂၉ ရက် ညကတည်းက တိုက်လေယာဉ်တွေကို နိမ့်နိမ့်လေး ပျံပြနေပြီး နောက်တစ်နေ့ ၃၀ ရက်မှာတော့ တိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့ လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလိုဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ကောင်စီက ခန့်ထားတဲ့ ပြန်ကြားရေး ဒု-ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်ပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး။
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ခြေမြန်တပ်ရင်း (၃၉၄) သီးမူထာ အခြေစိုက်စခန်းကို KNU က သိမ်းပိုက်ချိန်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က ဒုတပ်ရင်းမှူး တစ်ယောက် အပါအဝင် တပ်သား ၁ဝ ယောက် သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် ဒါကို လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က KNU တပ်မဟာ ၅ နေရာကို လေကြောင်းကနေ နေ့ရော၊ ညပါ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
KNU သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဒေပူးနို၊ တနေးလူတောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ကလိုဘောထာ ကျေးရွာ၊ မောယူနီကျေးရွာ၊ သယ်ဘိုးပလောကျေးရွာ၊ သီးကောထာကျေးရွာ၊ ဟိုကေကျေးရွာစဲ့ ကျေးရွာပေါင်း ခုနစ်ရွာလောက်ကို စစ်ကောင်စီက ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပြီး မတ်လ ၂၇ နဲ့ ၂၈ ရက်နေ့ နှစ်ရက်အတွင်း စုစုပေါင်း လူနေအိမ် နှစ်လုံး မီးလောင်ပြာကျခဲ့သလို သုံးဦးသေဆုံးကာ ကိုးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Free Burma Rangers ရဲ့စာရင်းအရ မတ်လ ၂၈ ရက်ကနေ ၃ဝ ရက်နေ့အထိ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လေကြောင်း ကနေ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးရတဲ့အရပ်သား အနည်းဆုံး ၁၃ ယောက်ရှိပြီး၊ ဒီအထဲမှာ အသက် ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးပါဝင်ပါတယ်။
စစ်ဘေးကြောင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား တစ်သောင်းကျော် ရှောင်ပုန်းနေရသလို တစ်ဖက် ထိုင်းနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ အီတူးထာကျေးရွာ၊ အူးဝဲကလိုးနဲ့ ပကာဒဲရွာက ဒေသခံ အယောက် ၃၀၀၀ လောက် ကိုလည်း ထိုင်းစစ်တပ်ကလက်မခံပဲ ဒီဘက်ကမ်းကို ပြန်ပို့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးခိုလှုံနိုင်ခြေ ရှိတာကြောင့် လူ လေးသောင်းကျော် ခိုလှုံနိုင်မယ့် ယာယီစခန်း (၇) ခု နယ်စပ်မှာ ထိုင်းအစိုးရက ပြင်ဆင် ထားတယ်လို့ပြောပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ထွက်ပြေးလာသူတွေကို လက်မခံပဲ ပြန်လွှတ်နေတာပါ။
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကတော့ သူတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့ နေရာကို ပြန်သွားရမှာ ကြောက်နေတာကြောင့် တောတောင်တွေမှာပဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
အလားတူပဲ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာလည်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် တိုက်ပွဲငယ်တွေရှိနေပြီး စစ်ရေးတင်းမာနေပြီလို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူက RFA ကိုပြောပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကလည်း စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA စတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ နယ်မြေတွေမှာ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု တွေလုပ်နေတာဟာ လူသားမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီတွေရရှိရေးကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားသွားမလို့လည်း CRPH ကဆိုထားပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ် လေယာဉ်တွေသုံးပြီး ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေလက်အောက်ခံ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် တစ်သောင်းကျော်ရှိနေပြီး၊ KNU တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေလက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ ဆောထိ(ရွှေကျင်) မြို့နယ်မှာတော့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ရာဂဏန်း အထိရှိလာပြီလို့ ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောပါတယ်။
တစ်လ အပစ်ရပ်မယ်လို့ စစ်တပ်ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးမှာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စရပ်များအပြင် အစိုးရရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားတွေ နှောင့်ယှက်ထိပါး တိုက်ခိုက်ချိန်မှအပ တပ်မတော်ရဲ့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဧပြီ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက် အထိ ရပ်ဆိုင်းမယ်လို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးက ဒီကနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် ဒီလို ရပ်ဆိုင်းတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ်တွေမှာ ပါဝင်နေသူတွေ ဒီကာလမှာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ကြိုးပမ်းစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ညီနောင်မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကိုးကန့် (MNDAA)၊ တအာင်း(TNLA)နဲ့ ရခိုင်(AA) တပ်တွေကတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်တာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ကနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ အဖြတ်လိုက်ခွဲပြီး အကြိမ်ကြိမ်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့် တဖက်သတ် အပစ်ရပ်တဲ့ကိစ္စကို ပြန်သုံးသပ်နေပြီလို့ မနေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဒေသခံတွေ နေအိမ်တွေကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့သူတွေကို စစ်ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးနေ
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားတဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အပါအဝင် မြို့နယ် ၆ ခုမှာ ဖမ်းဆီးခံရသူ အရေအတွက် ပိုများလာနေတယ်လို့ AAPP ပြော
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက မာရှယ်လော ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့သူတွေကို အခုအခါ စစ်ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးနေပါတယ်။
မတ်လဆန်းက မာရှယ်လော ထုတ်ပြန်ပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းက လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ တောင်ဒဂုံ အပါအဝင် မြို့နယ် ၆ မြို့နယ်မှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့သူတွေကို အင်းစိန်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ရာမှာ အခုလို စစ်ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးနေတာလို့ သိရပါတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်ခုံရုံးဟာ အကျဉ်းရုံးနည်းနဲ့ စစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပြီး တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်နဲ့ စီရင်လေ့ရှိပါတယ်။
အင်းစိန်ထောင် စစ်ခုံရုံးမှာ အမှုစစ်ဆေးခံရသူတွေအနေနဲ့ ခုခံပိုင်ခွင့် မရှိသလို တချို့တွေလည်းထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ကနေ အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအရေး လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ရှေ့နေ ဒေါ်ဇာလီအေးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒီလို မာရှယ်လော ထုတ်ခံထားရတဲ့ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာ မတ်လ ၂၁ ရက်ညက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ၁၆ နှစ် မပြည့်သေးသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးကတော့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ညက လက်ကို သေနတ် ထိမှန်ထားခဲ့ပြီး စစ်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူအပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်ဂလိနဲ့ လှမ်းချိန်တာ တွေ့လို့ဆိုပြီး ဖမ်းသွားတဲ့ နေ့ကတည်းကနေ ကနေ့အချိန်အထိ မိသားစုနဲ့ ဖုန်း နှစ်ကြိမ်သာအဆက်အသွယ် ရသေးတယ်လို့ အစ်မဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။
မာရှယ်လော ကြေညာထားတဲ့ ဒီမြို့နယ် ၆ ခုမှာ စစ်တပ်အင်အား အလွန်အကျွံ သုံးထားပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူ အရေအတွက်ဟာလည်း သိသိသာသာ များလာနေတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ရွှေပြည်သာနဲ့ လှိုင်သာယာ မြို့နယ် ၂ မြို့နယ်ထဲမှာတင် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမှုပေါင်း ၃၆ မှု ရှိပြီး အဲဒီထဲကမှ ၃ မှုကိုသာ စစ်ခုံရုံးက စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအရေး လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ "သင့်အတွက်ရှေ့နေများ အဖွဲ့"ထံက သိရပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ကတော့ လူ ၃၀၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးသူက လောလောဆယ် ၅၀၀ ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမြို့ပင်မသပိတ်စခန်းကို ဖြတ်ကျော်ရန်ကြိုးပမ်းသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ (၄)ဦးအား ပြည်သူများမှ ဖမ်းဆီးထား
Photo By Citizen Journalist
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ တာဟန်းရပ်ကွက်ရှိ ပင်မသပိတ်စခန်းကိုဖြတ်ကျော်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်အရပ်ဝတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၄)ဦးအား ပြည်သူများမှယနေ့နေ့လည် ၂ နာရီခန့်တွင်ဖမ်းဆီးထားသည်။
ဘီယာဆိုင်လိုက်ရှာနေရင်းတာဟန်းသပိတ်စခန်းနားရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖြေကြားခဲ့သည့် ဖမ်းဆီးရမိသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ကလေးမြို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဒုရဲအုပ် ကိုမင်း၊ တပ်ကြပ်ကြီး သိန်းနိုင်ဦး ဒုတပ်ကြပ် နန္ဒမင်း၊ ရဲတပ်သား ဖြိုးသီဟ တို့ဖြစ်ကြောင်း
ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ RCSS/SSA တပ်စခန်းများအားလုံးကို တိုက်ခိုက်မည်ဟု စစ်ကောင်စီ ပြော
သျှမ်းသံတော်ဆင့် ၊မတ် ၃၁ရက်
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် တွင် စခန်းချထားသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) တပ်စခန်းများအားလုံးကို တိုက်ခိုက်မည်ဟု စစ်ကောင်စီ မှ ချင်းရိုင်းခရိုင် မယ်ဆိုင်မြို့နယ်ခြားကော်မတီထံ အသိပေးထားသည်သူ သိရသည်။
ထိုစာကို စစ်ကောင်စီ ၏ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မတ် ၂၉ ရက်တွင် ကျိုင်းတုံ မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး ယခုကဲ့သို့သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
RCSS/SSA သည် တနိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် တွင် နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကို စစ်ကောင်စီမှ သိမ်းယူပြီးနောက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ (၁၀)ဖွဲ့ က အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးမည် မဟုတ်ကြောင်း လည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် RCSS/SSA၏ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ကလည်း စစ်ကောင်စီ မှ ငြိမ်းချမ်းစွာ လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို နေ့စဉ် သတ်ဖြတ်နေသည့်ပေါ် ကန့်ကွက်ပြီး၊ ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်သွားမည်ဟုလည်း နှင့် CNN Reuter ( ရိုက်တာ) သတင်းဌာန တို့ကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
စစ်ကောင်စီ အနေဖြင့် လူထုကို ဆက်လက် အကြမ်းဖက် နှိမ့်နင်းမှု ပြုလုပ်နေပါက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အနေ များက ငြိမ်းနေမည် မဟုတ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် က ဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်ပြောဆိုမှုပြီးနောက် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်တွင် စခန်းချသည့် RCSS/SSA ကို စစ်ကောင်စီ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ က တိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေသည် ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ TBC ကို စာလှမ်းပို့ခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် လွိုင်ကော်ဝမ်း RCSS/SSA တပ်စခန်း မှ အရာရှိ တဦးက “ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အဆင့်သင့် လုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်က ယာမ သောက်ပြီး ရူးနေတဲ့သူအတိုင်းပဲ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာ။ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုကတော့ ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရသေးပါဘူး” ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာတဝှမ်းလုံး ပြည်သူများက စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီမှ ပြည်သူများကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ကို ယနေ့ထိပြုလုပ်နေသည်။
စစ်အာဏာသိမ်း ပြီး ( ၅၈) ရက်အတွင်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ လက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးသည့် သူ (၅၂၀) ရှိပြီး သိရသည်။
ထို့ပြင် ကချင်ပြည်နယ်၊ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တွင်လည်း စစ်ကောင်စီ နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) တို့စစ်ဆင်ရေး စတင်နေပြီး၊ ကရင်ပြည်တွင်လည်း စစ်ကောင်စီ နှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)တို့ တိုက်ပွဲ မှာ နေ့စဉ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသည်။
KNU နယ်မြေ အတွင်း ဂျက်ရဟတ်ယာဉ် အသုံးပြုကာ ဗုံးကြဲမှုများလည်း ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် စစ်ကောင်စီ အနေဖြင့် RCSS/SSA ကို ဆက်လက်ပြီး စစ်ရေး ပြင်ဆင်လာနိုင်ကြောင်းလည်း နယ်စပ်စစ်ရေးလေ့လာသူအချို့က ခန့်မှန်းကြသည်။
လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ် RCSS/SSA တပ်စခန်းမှလည်း စစ်ရေးဖြစ်လာမည်ကို သတိဖြင့် စောင့်ကြည့်နေရသည်။
ဗန်း​မော်မြို့ သပိတ်တွင် ဆီးခုံကျည်ထိမှန်ခဲ့သည့် လူငယ်ကွယ်လွန်
31 March 2021 - Manmaw
ဗန်း​မော်မြို့သပိတ်တွင် ပါ၀င်ဆန္ဒပြ​နေချိန် ဆီးခုံကျည်ထိမှန်ခဲ့သည့် လူငယ်​လေး ကိုမျိုးသန့်ကျော် ကွယ်လွန်သွားပြီး ဖြစ်​ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မတ်လ(၂၇)၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နေ့၌ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့က နွေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို စစ်​ကောင်စီတပ်များမှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျည်ထိဒဏ်ရာရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
မတ် ၂၇ ရက်​နေ့တွင် စစ်​ကောင်စီ၏ လုံခြုံ​ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ပစ်ခတ်မှု​ကြောင့် ဗန်း​မော်မြို့သပိတ်တွင် က​လေးနှစ်​ယောက်၏မိခင် မ​ရွှေမြင့်လည်း ရင်ဘတ်ကျည်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရသည်။
​နွေဦး​တော်လှန်​ရေးတိုက်ပွဲတွင် ဗန်း​မော်တွင် ကျဆုံးသွားသူ သူရဲ​ကောင်း နှစ်​ဦရှိပြီဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၁၀ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်သည်။
လေယာဥ်ဆီသယ်သည့် ကား တစ်စီးပစ်ခံရ / ကျန်ဆီများ စစ်​ကောင်စီတပ်မှ လာသယ်သွား
လေယာဥ် ဆီသယ်လာသည့် ကား ယ​​နေ့ ည​နေ ၂ နာရီ ​ကျော်ခန့်က မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် လွယ်​ခေါ ​ကျေးရွာ လမ်းမ​ပေါ်မှာ ပစ်ခံရ​ကြောင်း ​ဒေသခံတစ်ဦးကဆိုသည်။
" အရပ်ဝတ်နဲ့ လူ ၇ ​ယောက်က ကားကိုတားပြီး ကားမှာပါတဲ့ သူတွေကို အရင် ဆင်းခိုင်းပြီး ပစ်တာတဲ့။ ဆီက ​လေယာဥ်ဆီတဲ့။ ​သေနတ် ၁၁ ချက်ထိတယ်။ ​ပေါက်​တော့ မ​ပေါက်ကွဲဘူး။ ဆီက တော့ တဝက်​လောက်ယိုသွားတယ်တဲ့" သူကိုယ်တိုင် သွားကြည့်ခဲ့သူ ​ဒေသခံတစ်ဦးကဆိုသည်။
ကျန်​နေ​သေးသည့် ဆီများကို စစ်​ကောင်စီတပ်က ၇ နာရီခန့်တွင်ဆီ​ဘောက်ဆာ ကားတွေနှင့်လာသယ်သွားပြီဖြစ်​ကြောင်း လည်းဆိုသည်။
ယခုအချိန် ​ကျေးရွာ အနီးအနားတွင် စစ်​ကောင်စီတပ်များ ရှိ​နေ​သေး​ကြောင်းလည်းဆိုသည်။
လွယ်​ခေါကျေးရွာသည် မြစ်ကြီးနားမှ ၁၈ မိုင်ရှိပြီး မြစ်ကြီးနား မန္တ​လေး လမ်းမ​ပေါ်မှာရှိသည့်ကျေးရွာဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက် မြန်မာစစ်တပ်မှ ကရင်ပြည်သူလူထုအ ပေါ်ဆိုးရွားစွာ သေစေနိုင်သော လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မူတြော်ခရိုင်/တပ်မဟာ ၅ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
မိုးညှင်းအခြေစိုက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့က ပြည်သူများထံ အသိပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်
မိုးညှင်းအခြေစိုက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ မိုးညှင်းမြို့ရှိမိဘပြည်သူများထံ အသိပေးစာတစ်စောင်ကို မတ်၃၁ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မှစတင်ကာ ယခု ၂လပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကာ အာဏာလုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု မှ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအပေါ် လက်နက်အားကိုးဖြင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးကာ ဆောင်ရွက်နေသည့်အပေါ် မိုးညှင်းအခြေစိုက် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှစတင်ကာ အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျသည်အထိဆန့်ကျင်တော်လှန်သွားမည်ဖြစ်ရာ မိုးညှင်းမြို့ရှိမိဘပြည်သူများမှလည်း ရပ်ကွက်အလိုက်သော်လည်းကောင်း၊လမ်းအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊လမ်းထိပ်အလိုက်ရရာနည်းဖြင့် ပါဝင်တော်လှန်ပေးကြရန် ပန်ကြားချက်တွင်ပါရှိသည်။
အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအထွေထွေသပိတ်ကိုမိုးညှင်းမြို့တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက်နေ့မှ စတင်တော်လှန်ခဲ့ရာ ယင်းတိုက်ပွဲအတွင်း မိုးညှင်းမြို့နယ်အတွင်းမှ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် မိုးညှင်းဒေသခံတစ်ဦး ဟိုပင်မြို့နေ တစ်ဦး စုစုပေါင်း ၃ဦးကျဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၆ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၂၀နီးပါးရှိခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် လူမဆန်သည့် အာဿာလုစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေး မနက် ၇နာရီနှင့်ညနေ ၅နာရီတွင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မည့် သပိတ်စစ်ကြောင်းတွင်မိုးညှင်းမြို့ကမိဘပြည်သူအားလုံးပါဝင်ပေးရန် ပန်ကြားချက်တစ်စောင်ကို မိုးညှင်းအခြေစိုက် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့က ယနေ့ မတ်၃၁ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
CDM ဆောင်ရွက်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း။
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်)
(၁) CDM (Civil Disobedience Movement) သည် စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးတွင် အထူးပင်ထိရောက် သော လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အောင်မြင်လျက်ရှိပါသည်။
(၂) ယနေ့ မတ်လ (၃၁) ရက် ည (၁၂) နာရီ အချိန်သည် CDM ပြုလုပ်မည့်သူများ CDM ပြုလုပ်နိုင်ရန် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောအချိန် ဖြစ်သည်။
(၃) ဧပြီလ ပထမပတ်အတွင်း ညီညွတ်သော ပြည်သူ့အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၄) စစ်အာဏာရှင်၏ အောက်တွင် အလုပ်မလုပ်လိုသဖြင့် အလုပ်ထွက်လာသူ၊ နှုတ်ထွက်စာတင်ပြီး အလုပ် ဆက်မလုပ်သူများကိုလည်း CDM အဖြစ် သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၅) ပြည်သူ့အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင် စစ်အာဏာရှင်နှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းနေသူများ၊ စစ်အာဏာရှင်၏ အစေခံများ၊ CDM မပြုလုပ်သူများသည် ပြည်သူ့အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သူများအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
(၆) အဆိုပါ CDM မပြုလုပ်သူများ၊ စစ်အာဏာရှင်၏ လက်ပါးစေများ၊ စစ်အာဏာရှင်၏ လက်ကိုင်တုတ်များ၊ စစ်အာဏာရှင်နှင့် ပူးပေါင်းသူများကို ပြည်သူ့အစိုးရ သက်ဆိုင်ရာဒေသ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက ပြင်းထန် စွာ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
(၇) ဒေသဆိုင်ရာ CDM အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
ဆိုးရွားလာနေသောလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် အရေးပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်မလိုအပ်သည့် အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကို မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြား
ဆိုးရွားလာနေသောလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် အရေးပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်မလိုအပ်သည့် အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကို မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားထားပါသည်။ အမေရိကန်သံရုံးဆက်လက်ဖွင့်ထားပါသည်။ မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်ထားရှိသည့် မိမိတို့၏ ကတိကဝတ်မှာလည်း မပြောင်းလဲဘဲရှိနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသည့် မိတ်ဆွေတို့၏ ရဲဝံ့သောသတ္တိကို မိမိတို့ ထောက်ခံအားပေးနေပါသည်။
Due to the deteriorating security situation, the State Department has ordered the departure of non-emergency U.S. Embassy employees and all family members. The U.S. Embassy remains open. Our commitment to the people of Myanmar is unchanged. We support your courageous efforts to buildabetter future for Myanmar.
UN ဝင်ဖို့ကလွဲရင် တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့
မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကနေ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်ပေးဖို့ကလွဲရင် တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်း (၄၅) ဦးက ဒီကနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ Global Leadership Foundation (GLF) ကနေ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီကို တရားဝင်ပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။
တောင်အာဖရိကသမ္မတဟောင်း ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ GLF ကို အမေရိကန် ဗြိတိန် ကနေဒါ ဩစတေလျှ နယူးဇီလန် ဆွီဒင် ဆွစ်ဇာလန် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာက သမ္မတ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခံနေရတာတွေကနေ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ R2P အခြေခံမှုတွေကို အသုံးချပြီး အချိန်မှီဝင်ရောက်ဟန့်တားဖို့လည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ရုရှားက ကန့်ကွက်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ကျန်မဟာမိတ်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ်းသိမ်းရေးတပ်စေလွတ်တာလုပ်သင့်ပြီလို့လည်း အကြံပေးထားပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ စကားပြောညှိနိုင်းရမဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့သလို အရေးယူပိတ်ဆို့မှုနဲ့လည်းမလုံလောက်တာမို့ ကုလသမဂ္ဂက ဝင်ရောက်ကာကွယ်ပေးဖို့နည်းလမ်းပဲရှိတော့တယ်လို့ GLF ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေက ပြောပါတယ်။